अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम नतिजा किन रोकियो ? – Upahar Khabar
अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम नतिजा किन रोकियो ?
प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १३:१७ November 7, 2020
न्यूयोर्क– अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अझै आइसकेको छैन । डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नु भएका जो बाइडनले महत्वपूर्ण राज्यहरुमा अग्रता कायम गरेकाले उहाँ जीत नजिक रहनुभएको छ ।
निर्णायक राज्य मानिएको पेन्सिलभेनियाको ९८ प्रतिशत मत गणना सकिँदासम्म बाइडेनको अग्रता छ । बाइडनले पेन्सिलभेनियामा जीत हासिल गरेमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुहुनेछ । मत गणना भइरहेको अर्को राज्य जर्जियामा ९९ प्रतिशत मत गणना सम्पन्न हुँदा डेमोक्र्याटहरु नै झिनो मत अन्तरले अगाडि रहेका छन् । यसै गरी नाभाडा र एरिजोना राज्यमा पनि बाइडेनले नै अग्रता कायम गर्नुभएको छ । पछिल्लो नतिजाले बाइडनको ह्वाइट हाउसको यात्रा सहज बनाएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा फलदायी भएको छ: नेपाली सेना
काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज बढी चिसो महसुस